Filannoof baati sagaltu haafe. Biyyattiin gara filannoo kan seenaa jirtu hin fakkaatu. Haafurrii filannoo hin jiru. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFilannoof baati sagaltu haafe. Biyyattiin gara filannoo kan seenaa jirtu hin fakkaatu. Haafurrii filannoo hin jiru.
Filannoof baati sagaltu haafe. Biyyattiin gara filannoo kan seenaa jirtu hin fakkaatu. Haafurrii filannoo hin jiru!!
OPDOn Oromoota ”Shanee” jechaa maqaa itti baasaa hidhaatti gurtii, jarrii ABO ofiin jedhu ammoo dur walirraa luqqa’aani badani amma yaada morkii ‘anatu ABO’ jedhuu gara Boordi Filannoo yoo fudhani deeman dubbii kaase galmaa’u dadhabani jiran.
Warrii ABO kuni baay’ee wal-madeesse. Kan walii-galan hin fakkaatu. Kanaaf furmaanni maqaa kabajamaa ABO jedhu kana hunda isaanirraa dhowwuudha. Ummata Oromootti keennu. Yoo walii-galuu didan maqaa ummatatti yaa keennan. Ofii tokkon tokkon isaani dhaaba isaanif maqaa haaraa yaa baafatan. Yaada gaarii yoo qabaatan maqaa kamunu mo’uu danda’u.
OPDO Oromiyaa keessaa angorraa arii’uf akka kiyyatti Baqqalaa Garbaa ijoollee haaraa dhaloota Qubee waliin ta’e hojjachu qaba. Warrii ‘ani ABO’ jedhe mormii kaasu hundii yoo mo’uu barbaade Baqqalaa Garbaa fi namoota biroo cicciimo Dhaloota Qubee waliin yaa hiiriru. Kan hubatamu qabu garuu, warra baay’eetu gandatti galee paartii gosaa tolfate barcuma argachuf foolate eegaa jira.
Ilkaan baayachuufi xiqqaachuu malee muktaar kadiriniin wol addamiti.